Nanomboka tao Belize ny vaksinin'ny sehatry ny fizahan-tany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Belize » Nanomboka tao Belize ny vaksinin'ny sehatry ny fizahan-tany
Ny birao fizahan-tany Belize dia manamafy fa ny talata 19 martsa 30 no dingana faharoa amin'ny fampielezan-kevitra momba ny fanefitra imasom-pirenena Covid-2021
Dosia 8,000 amin'ny vaksinin'ny AstraZeneca dia omena ho an'ny sehatry ny fizahan-tany Belize
Ny fampielezan-kevitra dia hikendry ireo mpiasa laharana voalohany heverina fa tandindomin-doza lehibe
Ireo izay 40 taona no ho miakatra dia hahazo ny fatra voalohany amin'ny Vaksinin'ny AstraZeneca
The Biraon'ny fizahantany Belize (BTB) dia nanamafy fa ny vaksinin'ny sehatry ny fizahan-tany dia nanomboka ny talata 30 martsa 2021. Ity no dingana faharoa amin'ny fampielezan-kevitry ny fiaramanidina nasionaly Covid-19, izay ahitàna ireo mpikambana ao amin'ny National Assembly & Judiciary, mpampianatra, polisy, ary ny mpiasa ao amin'ny departemantan'ny Fadintseranana sy ny fifindra-monina.
Vao tsy ela akory izay, ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny Diaspora Relations ary ny BTB dia nanao fanadihadiana teo amin'ireo mpiantsehatra indostrialy hamaritana ny isan'ny olona manaiky handray io vaksininy io. 87% amin'ireo namaly no nilaza fa liana tamin'ny fanaovana vaksininy izy ireo.
Dr. Natalia Largaespada Beer, Mpanolotsaina Teknika ao amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fahasalamana dia nampahafantatra tamin'ny BTB fa 8,000 40 ny vaksinin'ny AstraZeneca dia omena ho an'ny sehatry ny fizahantany ary ny fampielezan-kevitra dia hikendry ireo mpiasa eo an-toerana voalohany heverina fa tandindomin-doza. Noho io antony io, ireo izay 12 taona no ho miakatra dia hahazo ny fatra voalohany amin'ny Vaksinin'ny AstraZeneca. Ny fatra faharoa dia kasaina hatao mandritra ny XNUMX herinandro.
"Vaovao tsara ny fahazoana ny vaksinin'ny COVID-19 ho an'ireo miasa amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Ny vaksinin'ny mpiasa fizahan-tany amin'ny laharana voalohany; ny fihenan'ny tranga COVID-19 mavitrika; ny fahazoana ny tombo-kase an'ny World Travel & Tourism Council (WTTC) cap Travel Safes; ary ny fampiharana tsy tapaka ny programa Gold Standard Certification dia mampita amin'izao tontolo izao fa toerana azo antoka i Belize. Izany dia hanampy anay amin'ny ezaka ataontsika hanamafisana ny fahatokisan'ny mpandeha sy hisarika ny mpitsidika an'i Belize, "hoy i Hon. Anthony Mahler, minisitry ny fizahantany sy ny fifandraisana am-pielezana.
Araka ny voalazan'ny Dr. Beer hatreto dia Belize 21,000 no nahazo ny fatra voalohany tamin'ny vaksininy. Nilaza izy fa anio, ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny Fahasalamana dia handray fatra vaovao 33,600 19 amin'ny vaksinina ao anatin'ny programa COVAX, fandraisana andraikitra manerantany ho an'ny fahazoana miditra amin'ny vaksinin'ny COVID-XNUMX tarihin'ny UNICEF, Gavi, ny Vaksinim-pirenena, ny World Fikambanana ara-pahasalamana, ny fiaraha-miasa ho an'ny fanavaozana ny fiomanana amin'ny valanaretina, sy ny hafa. Ny fatra fanampiny amin'ny vaksininy dia horaisina amin'ny herinandro ho avy.
Nosy Virgin British: ny fahatongavan'ireo mpandeha hiantoka ny vidin'ny tany sy ny fitaterana an-dranomasina